Qarax gaas oo ka dhacay Koonfur Bari Nigeria - BBC News Somali
Qarax gaas oo ka dhacay Koonfur Bari Nigeria
Ma cadda waxa dhaliyay qaraxa ka dhacay warshada, balse dad goobjoogayaal ahaa ayaa sheegay in dab weyn uu halkaasi ka kacay. Kooxaha dab-demiska iyo dadka deegaanka ayaa muddo saacado ah ku howlanaa deminta dabkaasi.
Wararka ku aaddan tiradad dadka ku dhintay qaraxaasi ayaa kala duwan. Qaar ka mid ah goobjoogayaasha ayaa sheegay in shilkaasi ay ku dhinteen 35 qof, halka kuwo kalena ay tirada gaarsiinayaa in ka badan boqol, oo ay ku jiraan shaqaalaha warshada iyo dad ka ag dhawaa goobtaasi.
Booliska ayaa xaqiijiyay in qaraxaasi uu dhacay, balse kama aanay hadlin tirada dadka ku waxyeeloobay. Shilkan ayaa naxdin ku abuuray dadka ku nool degmadaasi oo isu diyaarinayay munaasabadda ciidda masiixiga.